विद्यार्थीहरूको मा जूनियर पाठ्यक्रम अभ्यास गर्न सक्छन् मा कोर्ट को सामान्य अधिकार क्षेत्र — एक अदालतले. विद्यार्थीहरूको को वरिष्ठ पाठ्यक्रम मा इंटर्नशिप को मध्यस्थता अदालत, विभिन्न विभाग, र व्यापारिक संरचना छ । यो अभ्यास पछि सामान्यतया काम पाउन सजिलो रूपमा एक कानूनी सचिव, श्रम निरीक्षक, एक प्रहरी अधिकारी छ ।
अन्य व्यवसाय छ, अधिक जटिल छ । त्यसैले, तुरुन्तै स्नातक पछि भएको एक नोटरी काम छैन. यो स्थिति गर्न खटाइएको नागरिक संग उच्च कानूनी शिक्षा, तालिम को एक अवधि लागि कम भन्दा एक वर्ष मा राज्य नोटरी कार्यालय वा निजी नोटरी, पारित योग्य परीक्षा र भएको एक लाइसेन्स गतिविधिहरु.
बन्न एक मुद्दा चलाउने व्यक्ति, यो छ आवश्यक छैन, एक वर्ष काम गर्न एक सहायक मुद्दा चलाउने व्यक्ति वा अन्वेषक । पछि यो प्राप्त गर्न सम्भव छ. यो पोस्ट को उप मुद्दा चलाउने व्यक्ति छ । र मात्र एक निश्चित समय पछि (अक्सर — वर्ष), को उपस्थिति व्यावसायिक गुणहरू लागि, तपाईं मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ, यो मुद्दा चलाउने व्यक्ति गरेको कुर्सी ।
कठिन सडक शीर्षक वकील.
यो हुनेछ धेरै वर्ष को काम माध्यम एक, र पारित योग्य आयोग
र प्रतिष्ठा कमाउने उच्च गुणवत्ता विशेषज्ञ विजेता सबै, यो अवस्थामा संभावना लिन धेरै वर्ष छ ।